Receptionist | Lucky Child Co., Ltd. ﻿
14.5.2019, Full time , Service
•	အသက် 20 မှ 30 နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမည်။
•	ဘွဲ့ကြို (သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	English Speaking Basic ,Computer Basic ,ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်သူဖြစ်ရမည်။
•	Reception ပိုင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်ခန့်ရှိပြီး ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
Work location No.(112) , U Chit Maung Street , Bahan Township, Bahan, Yangon
266 Days, Full time , Service
Receptionist Customer Service & Call Centre jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Lucky Child Co., Ltd. Customer Service & Call Centre jobs Customer Service & Call Centre jobs Receptionist Jobs in Myanmar, jobs in Yangon